संघीयताप्रति जनतामा वितृष्णा बढेको बताउदैं ओलीले माओवादीलाई भने – ‘तिम्रो समर्थन चाहिएको छैन, फिर्ता लैजाउ’ – ThePressNepal
संघीयताप्रति जनतामा वितृष्णा बढेको बताउदैं ओलीले माओवादीलाई भने – ‘तिम्रो समर्थन चाहिएको छैन, फिर्ता लैजाउ’
काठमाडौ चैत्र ३० । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनतामा संघयता प्रति वितृष्णा बढ्न थालेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले संघीयताले कामै गरेन भन्दै यो काम नलाग्ने रहेछ भन्न थालेको दावी गरे ।
उनले भने – ‘जनताले संघीयताले काम गरेन भन्न थालेका छन् । मन्त्री भनेका छन् । सांसद भनेका छन् । कुदेका छन् । कागज बोकेको छ । अपवित्र गठबन्धन गरेर प्रदेशका सरकार हटाउने खेल चलाइएको छ । यस्तो दृष्यले जनताले संघीयता नहुने रहेछ भन्न थालेका छन् । संघीयता चल्ने रहेनछ भन्न थालेका छन् ।
विकास नहुने, जनताको पक्षमा कुनै काम नहुने अनि द्वैष फैलाउने घृणा फैलाउने काम हुन थालेको छ ।’सोही कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी,काँग्रेस र आफ्नै पार्टीको खनाल- नेपाल समुह प्रति पनि आक्रोष पोखेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई लक्षित गर्दैं ओलीले देशमा वितण्डा मच्चाउने कुन हविगत हुने हेर्न आग्रह गरे ।
उनले भने- ‘जसले देशमा वितण्डा मच्चाए । जसले लोकतान्त्रिक पद्धती विरुद्ध लागेर लोकतन्त्रवादी र वामपन्थीलाई मार्ने काम गरे । दक्षिणपन्थी र अराजकतावादीसँग मिलेर जनता मारे त्यसका पछी लाग्नेको कुन हबिगत हुन्छ हेर्दै जानुहोला ।’
उनले थपे ‘पार्टी कब्जा गर्‍यौं । केपी ओलीलाई समाप्त पार्‍यौं भनेको होयन ? केपी ओलीलाई भित्तामा पुर्‍याउने रे ? कोहीले धूलोमा पुर्याउने, सिध्याइदिने रे । सबैतिर हटाएकाहरुले संसद विघटित भएकाले संसद सदस्यबाट निकाल्न नसकेको । नत्र त संसदबाटै निकाल्थे ।’
उनले माओवादीलको समर्थन नचाहिएको समेत प्रष्ट पारे । ‘मेरो सरकार बहुमतको हो । जुन सरकारसँग बहुमत छ, उसले किन राजिना दिने ? समर्थन फिर्ता लैजाउ । किन समर्थन गरिहेको ? बहुमतको सरकारले किन राजिनामा दिने । चाहिएको छैन तिम्रो समर्थन । फिर्ता लैजाउ ।’
माधव नेपालहरु एमाले फुटाउन लागेको आरोप लगाउँदै ओलीले कुराचाहिँ एमाले नै बलियो बनाउने रे ? भन्दै आक्रोप पोखे । प्रचण्ड–माधव नेपालले कांग्रेससमक्ष बिन्तीपत्र हाल्न गएको भन्दै उनले थपे , ‘जो भेट्यो त्यसलाई प्रधानमन्त्री भइदेउ न भन्या छ ।
शेरबहादुरदेखि महन्थसम्मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन् । त्यो किनभन्दा कम्युनिष्ट सरकार ढाल्न र कम्युनिष्ट आन्दोलन ध्वस्त बनाउन ।’
Previous साना पार्टीले मागे स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नै दलीय चुनाव चिन्ह
Next तत्काल लकडाउन नगर्ने